Feysal Cali Waraabe oo af- lagaadeeyay dadka Soomaaliyeed isagoona ku tilmamay Meyd |
Feysal Cali Waraabe oo af- lagaadeeyay dadka Soomaaliyeed isagoona ku tilmamay Meyd
Guddoomiyaha xisbiga UCID ee mucaaradka Somaliland, Injineer Feysal Cali Waraabe ayaa weerar aflagaado ah ku qaaday dadka Soomaaliyeed isagoona ku tilmaamay meyd oo kale.
Isagoo u warramayay VOA-da ayuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay la mid yihiin meyd oo kale isla markaana Somaliland laga doonayo in ay ka tashadaan oo ay wax la qeybsadaan asaagood.
“Soomaaliya waa meyd oo kale marka meyd in la kor fadhiyo ma ahan oo waa in aan wax la qeybsano asaageyn” ayuu yiri Feysal Cali Waraabe oo ah nin inta badan ku hadla waxa afkiisa soo qabto.
Sido kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ayaa ka hadlay wadahadallada u socda dowladda fedaraalka iyo maamulka Somaliland, wuxuuna sheegay in wadahalladaas uu burburay oo wuxuu noqday mid socon waayay ayuu yiri.
Wuxuu sabab uga dhigay markii dowladda Turkiga ay la wareegtay martigalinta shirarka u dhexeeya labada dhinac wuxuuna intaas ku daray in Turkiga uu ka duway waddadii horrey ay ku socdeen wadahadallada oo dhexda ayuu ku galay ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in shirkaas Somaliland aaney waxbo ka soo faa’idi doonin marka laga reebo in uu dhibaato u horseedo mooyee sidda uu hadalka u dhigay.
Mar uu ka hadlaayay wax yaabaha laga faa’iday shirarka u socda Somaliland iyo dowladda Soomaaliya wuxuu sheegay labo qoddob in ay yihiin waa mida horre in Somaliland ay tahay dal madax banaan iyo in labada dhibac deeqaha loo siiyo si madax banaan oo aan la is hoos keenin.
Feysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in beelaha ay ka soo kala jeedaan madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha ay ku heshiiyeen in ay baabi’aan Somaliland balse arrintaas xag alle kama dhicin oo Somaliland waa dal madax banaan ayuu yiri.
Feysal Cali Waraabe ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay ay u baahan yihiin in loo dhigo gogol nabad maadama dowladda ay ku dhisan tahay 4.5 isagoona kula dardaarmay in ay u turaan shacabkooda dhibaatada ku soo jiray 23-kii sanno ee la soo dhaafay. order Kamagra online cheap, purchase Zoloft.